Ukunika amandla i-Most Captivating Webcasting Workflows ne-Matrox® Monarch EDGE-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, u-Broadcast of Broadcasting of NAB Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » Okufumaneka » Ukunika amandla i-Most Captivating Webcasting Workflows ne-Matrox® Monarch EDGE
Ukunika amandla i-Most Captivating Webcasting Workflows ne-Matrox® Monarch EDGE
Ividiyo ye-intanethi kunye namaqonga aphezulu-phezulu (ii-OVP kunye ne-OTTs) zihlala ziguqukayo. Abasebenzisi bangakwazi ukuma ngokusebenzisa i-latest-in-frame frame (HFR) i-4K, i-4K 360 VR, kunye nokukhethwa kweekhamera ezininzi-kuxhaswa kwi-desktop, eselula kunye ne-Smart TV-based video players. Eyilwe ukuthatha iifayile zokusebenza zokusasaza ezikhoyo namhlanje, uMatrox Monarch EDGE inikezela ngabasasazo kunye nabanye abaqeqeshi bevidiyo ngeendlela ezinamandla, ezisezantsi, kunye ne-H264 eneenkcukacha ezinamandla ezifakwe kwi-compact, amandla kunye nezixhobo eziphathekayo.
Izindlela zokufaka iindlela eziqinisekisiweyo zokuhlangabezana nemigangatho yanamhlanje
I-codec yeH264 iyamkelwe kwihlabathi jikelele kwaye inokusasaza. Ukusebenza okuyingqalileyo kwe-EDGE kugcina ixabiso leedatha ngokukodwa xa linciphisa i-latency yonke ngaphandle kokunikela umgangatho. Imisebenzi ye-EDGE ye-encoding yokuzimela nganye ngegalelo ingaqwalaselwa ukusalela kwiindawo enye okanye ezininzi. Umsebenzi ngamnye ufumana inzuzo kwi-injini enamandla yokwenza i-intanethi ukuqinisekisa ukuphela kweemifanekiso kunye ne-audio ezifakwe kwiikhowudi.
Ukwazi ukujongana nemisebenzi emininzi, i-Monarch EDGE inikeza amandla angenakulinganayo, anamandla okudibanisa kunye nezicelo ezingenakubalwa kunye nokufumaneka kwendalo yonke ye-H264 codec. I-Monarch ye-EDGE, i-compact design eyenza ikulungele ukufakwa kwi-fly pack-pack, i-OB van, okanye ngeyunithi yesibini ye-Monarch kwi-1RU-space rack. I-4K UHD /HD Iimpembelelo zenza i-Monarch EDGE ibe yinto efanelekileyo kuyo nayiphi na isiganeko esiphila kuyo esixutywe ngeefayile ezininzi, njengemicimbi yezemidlalo kunye neekonsathi. Njengeqonga eliphezulu lokukhupha i-encoding platform, i-Monarch EDGE ingamkela ezine ezizimeleyo HD izibonelelo kunye nokuhambisa imijelo emininzi nganye yegalelo, okwenza ukuba ifaneleke ukufakelwa kwamagumbi okupakisha.
Ukujongana nemisebenzi ephumayo
I-EDGE i-EDGE ifanelekile ngokusingatha imithombo yokusebenza ye-webcasting ephumayo namhlanje, njengalezo ezenza umxholo we-4K UHD. Ukuze kube lula ukuphakamisa i-Monarch ye-high-frame-rate rate, i-4K UHD yokukwazi ukufakela ikhowudi, i-webcasters kufuneka ibambe ividiyo ngokusebenzisa ikhamera ye-4K UHD kunye nezixhobo kwaye ihambise iVideo ye-EDM-encoded video kwi-OVP yokukhetha. Ukusuka apho, i-webcasters ingavumela i-OVP ukuba ixhomekeke kwi-downscaling. Isizathu salokhu kukuba, ngelixa izidlo ezinikwe kwizigqibo ezincinci kune-4K UHD zinokuba zilungele izikrini ezincinci, umphumo ungaphantsi kwe-optimal, izikrini ze-TV ze-4K ze-UHD ezinokuthi i-TV ngokwayo ifanele ikhuphe umxholo kuwo izigqibo eziphantsi. Xa imilambo ihanjiswa kwi-4K UHD kwi-OVP, ezo zi-OVP ziza kunqumla ukucima ukulungelelanisa ubungakanani bezkrini ezincinane, ezifana nee-laptops, iipilisi kunye ne-smartphones ukwenzela ukuba izikrini ezincinci zibe ziyakwazi ukujonga umgangatho wezithombe ezikhethekileyo. Ukusebenzisa i-Monarch EDGE, i-webcasters ingakwazi ukuhambisa ividiyo eyiyo ephezulu kwi-size yeskrini, kwaye ababukeli baya kubona imveliso yokugqibela kunye nomgangatho ophezulu wekhontrakthi.
Enye indlela uMargin EDGE anokunceda ngayo i-webcasters ukuba ikhulise i-4K UHD ukuhanjiswa ngokuvumela abasebenzisi ukuba bathathe kwi-4K UHD baze bahambise ubuninzi beefomathi ezahlukeneyo kwii-OVP ezahlukeneyo ngexesha elinye. Ngokomzekelo, i-Monarch EDGE yenza kube lula ukusakaza kwi-Facebook kwisisombululo sayo sokucetyiswa kwe-720p, kwaye ngexesha elifanayo, ukuthuthela kwi-YouTube kwi-4K UHD - ngelixa unemiphumo eyongezelelweyo engaya kwezinye i-OVP okanye iiseva zamaphephandaba njengeWowza. Imisebenzi yokusebenza eyenza ukuba ifune indawo ezininzi HD ukutya, i-Monarch EDGE inakho ukudibanisa ezininzi HD imifudlana iya kunikwa kwiindawo ezili-8 ze-16 ezahlukileyo ezingenakuze zifikelele nakwiindawo ezibonakalayo. I-Webcasters ingasebenzisa injini ye-Monarch ye-encod ye-encoding enegunya elinamandla yokwandisa ukufikelela kwabo kwaye idibanise nabaphulaphuli babo apho bakuyo.
Ngeziphumo ezine ezihambelanayo kwidivaysi nganye, i-Monarch EDGE inokungena ngokukhawuleza kwaye ixhobise iifowuni zokusebenzela i-webcasting ezinikezela umxholo wokuba namava amaninzi eekhamera ze-OVP ezifana ne-YouTube. I
iqonga ngoku unikezela abasebenzisi amandla okukhetha nokutshintsha phakathi kweengcingo ezininzi zekhamera njengoko bebukela umxholo wokuphila. Ukongezelela, iinkonzo zamashishini ezikhethekileyo ezijolise ekuqeqeshelweni kwezemidlalo nakwiimethike zezemidlalo nazo zingasebenzisa iimpembelelo zeMonarch ezine ezilungelelanisiweyo ukuze zondle i-replay-angle replay kunye neendawo zokubukeza. I-EDGE i-EDGE sele ichongiwe kwaye ikhethwe ngamaqela angamazwe ngamazwe, aphezulu kunye nebhola lebhola yombhobho njengengxenye ebalulekileyo kwimigangatho yokudlala yevidiyo.
I-Monarch ukukwazi ukuxhasa iinkqubo ezahlukeneyo zokuhambisa ivumela ukuba ihambelane ngokuzimeleyo kwimimiselo yomsebenzi esebenzisa zombini amanethiwekhi avulekileyo kunye nendawo. Uninzi lwe-OVP kunye neeseva zeendaba ziqala ukuxhasa i-SRT, umgaqo-nkqubo omtsha okhupha umthombo ovulekileyo owanikezela ukuthembeka kwefomathi ethandwa kakhulu kwi-RTMP, ngelixa kuncitshiswa ukusetyenziswa kwee-intanethi ezivulekile. Kwiinkonzo zendawo, i-webcasters ingakhetha i-MPEG-2 TS okanye i-RTSP, kuxhomekeke kwinto abafuna ngayo imisebenzi.
Ukukhulula amava angaphaya kokunikezelwa kwenkqubo yemveli, i-Monarch i-EDGE ibeka phambili kwizinto eziza kubakho-i-events-webcasting innovations ukuvumela abaqeqeshi bevidiyo ukuba bathuthele ukuphoqa umxholo wokuphila kwanoma yimuphi ubungakanani beskrini. Ukususela kumandla okubandakanya amava amaninzi eekhamera kwi-intanethi, ukuxhobisa abaqeqeshi ngamathuluzi okubuyisela ngaphandle kweyiphi na imicimbi yezemidlalo, iMarge EDGE iyona mveliso efanelekileyo yokufakela i-encoding ukuthatha iifayile zokusebenza zewebhu ezithandekayo kakhulu namhlanje.
Izixhobo ezine ze-SDI (3 x 3G, 1 x 12G)
· I-DisplayPort yangaphambili (imodeli enye okanye i-quad)
· I-analog yomfuziselo okanye i-audio edibeneyo
· Umkhiqizo weGenlock
· Izixhumo zombini ze-GigE
· Compact 1RU ububanzi bemizuzu
· Iphaneli yangaphambili yesimo kunye noqwalaselo
· Amandla aphantsi
· IMatrox Monarch EDGE Control Hub izinikezele isicelo seWindows
Ukufumana olunye ulwazi, tyelela matrox.com/video/edge/broadcast-beat
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli CES2017 Igalelo UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli MStar Iilori zangaphandle ezisasazwayo SoftAtHome SoftAtHome, MStar, iCES2017 I-Ultra HD Forum Injini yeVidiyo ndiphila	2019-06-14
Previous: Iimpawu ezikude kwi-Post-Production
next: Umxhasi we-PBT we-EU CLUBBING TV ivula i-Ibiza kunye ne-Formentera -